Sachigaro Wemwana |
Vana Sachigaro 1720-vana #
Vana sachigaro 1719-Vana #
Vana Sachigaro 1619-vana #
Kid Chairs, Chidiki Sachigaro 1618 ...
Kudya tafura T-55 #
Chipurasitiki Sachigaro F805 #
Item Kwete: F805 #
Chigadzirwa Chigadzirwa: 55 * 48 * 82.5cm
Chinyorwa: Eco-inoshamwaridzika Polypropylene + Simbi
Pasuru: 4pcs / ctn
MOQ: 200pcs / ruvara
Chinokosha Mutengo China China epurasitiki PP PP Kofi Bar Sachigaro - Forman
Inozvidavirira yakanakisa uye yakanakisa chiyero chekwereti yakamira ndiyo misimboti yedu, inozotibatsira panzvimbo yepamusoro. Tichiomerera kune tenet ye "yemhando yekutanga, mutengi mukuru" kune Yakakosha Mutengo weChina Yemazuva Plastic PP Revhisi Kofi Sachigaro, Isu takavimbisa mhando, kana vatengi vasina kufara nemhando yepamusoro yezvigadzirwa, unogona kudzoka mukati memazuva manomwe neyavo epakutanga. inoti. Inozvidavirira yakanakisa uye inonakidza chikwereti chiyero chakamira ndiwo maitiro edu ...
Achangosvika Kusvika Upholstered Kudya Kamuri Sachigaro - Chipurasitiki Sachigaro 1681 # - Forman
Dhizaini ndiwo Mweya wePurasitiki Sachigaro. Ipa zvigaro zvemazuva ano kumafaro kana chiitiko chisina kujairika neaya ma armchair. Yakanakira kudya kwemukati kana kushandiswa kwekunze, zvigaro izvi zvinonamira nyore kukurumidza kuchengetedza uye kutakura. Iyo chigaro chakagadzirwa neyepakutanga nharaunda-inoshamwaridzika polypropylene zvinhu, simbi yegumbo furemu inogona kuve yakaputirwa upfu kana huni kutamiswa. Mifananidzo yakasarudzika yesarudzo dzako. Sachigaro uyu unowanzo kuve wekunze-kushandiswa, zvakare kunogona kuve kwekunze-kushandiswa uine unti-UV zvinhu uye yekunze poda kupfeka.
Pasi pemutengo Square Tafura - Kudya Tafura-T6 - Fomu
Chigadzirwa chinobatana pakati pezana ramakore uye maindasitiri emhando dzechizvino neazvino dhizaini dhizaini yekugadzira zvidimbu zvisingagumi izvo zvichinyatso kurumbidza chero kushongedza. Chigadzirwa, Solid Wood Legs, muWhite inopa yazvino kubata kune yako yekudya-mukicheni nzvimbo, kana chero nzvimbo panodiwa tafura yekumisikidza. Iyo yekupedzisira yemazuva ano yakachena machena huni kumusoro inosanganiswa musina chero nekushongedza nepo matafura etafura akagadzirwa neyakaomeswa huni huni uye inoratidzira inogadzikana pasi glides iyo inobvumidza iwe kuti ugare pamwero pane un ...
Yakakwira Hunhu hweMacheya Akachipa - PLASTIC CHAIR - 1765 # - Forman
● Kubatsira kwedu: Tine zvitupa zvepamutemo zvezvizhinji zvezvigadzirwa zvedu. Tinogona kupa EN12520 bvunzo mushumo kune chimwe chigadzirwa. OEM odha inowanikwa. Fekitori yedu ine zvitupa zveBSCI neSGS. Inogadzira mashopu ekugadzira. Yakakwira mhando & Yakanakisa Sevhisi & Yakanaka Mutengo ● Yedu Fekitori & Chikwata: Tianjin Forman Furniture ndeye inotungamira fekitori pakati kuchamhembe kweChina iyo yakavambwa muna 1988 kunyanya ichipa yekudyira zvigaro nematafura. Forman ine hombe yekutengesa timu ine vanopfuura gumi nyanzvi ...
OEM Mugadziri Sachigaro - Chipurasitiki Sachigaro - F803 # - Fomu
Chigaro chakasununguka uye chigadziko chakasimba chinoita kuti chigaro chepurasitiki chiwedzere kuwedzera kune yekudyira, imba yekutandarira, kana kicheni. Chigaro chisina kuiswa chinopa rutsigiro rwakawanda kuburikidza negomba rayo rakadzika uye zvigaro zvepamusoro zvemaoko. Makumbo anotambanudzira kunze kuti aite hwaro hwakazara, kugadzirisa kugadzikana kwechigaro uye kugadzira kuenzana, kuenzana kutaridzika.
Wakavimbika Mutengesi Chena Dining Tafura Set - Kudya Tafura-T2 - Fomu
Tianjin Forman Furniture inotungamira fekitori pakati kuchamhembe kweChina iyo yakasimbiswa muna 1988 ichinyanya kupa zvigaro zvekudyira nematafura. Forman ine dzakasiyana siyana dzakanaka dzakanaka dzimba dzekudyira matafura aripo. Kunyangwe iwe uchitsvaga dhizaini yemazuva ano inogona kukwana mukamuri diki, kana hombe, tafura yechinyakare ine nzvimbo yemhuri yese uye nezvimwe, kuForman unozopambwa nesarudzo. Tafura yekudyira ndeimwe yemidziyo yakakosha mumba mako - kunyanya kutenderedza ho ...
Yakanakisa mhando Girazi Uye Simbi Kofi Tafura - A Round Tafura, Diki, 2 Mavara T-32 # - Fomu
Iyo Around tafura inosanganisa inoyevedza kutaridzika neanoshanda uye akareruka dhizaini. Mugadziri aida kugadzira tafura ine hushamwari, yakagadzikana uye yakasimba iyo inochengetedza iyo kapu yekofi kuti irege kuwira pasi - ndosaka akagadzira kamupendero kadiki kutenderedza tafura. Around tafura inokoka vanhu kuti vaungane kwese kwese kwaunoisa. Masikisi akasiyana epatafura akabatana pamwechete nyore uye anotaridzika akasarudzika pachawo.
Fekitori yakananga Fast Fast Chairs - Plastiki Chair-1698 - Forman
Ichi chigaro nemugadziri ane mukurumbira chinopfuura chinongova chese-chepurasitiki cheya ine dhizaini yemazuva ano. Kutenda kune imwe nzira yekumberi-yekuregedza, iyo zvakare inopa ergonomic zvigaro. Ichi chigaro chinouya mune yakakura yakakura mavara. Inogona kuunganidzwa uye zvakare i100% inogadziriswazve. Hapana munhu, kana akatarisa kuForman stackable epurasitiki cheya, aigona kufungidzira kufambira mberi kwetekinoroji iyo yaifanirwa kuitwa kuti fenicha iyi ive yechokwadi. Mitsetse yakatwasuka inosanganiswa nemakachena machena mak ...
Yakatsva kutengeswa Dema Girazi Kofi Tafura - A Round Tafura, Diki, 2 Mavara T-32 # - Fomu
OEM / ODM China Chairs Yekudyira Kamuri Yemazuva Ano - PLASTIC CHAIR - 1682 # - Forman
Kugamuchirwa kuMweya. Sachigaro uyu ane mitsara inoyevedza uye yechinyakare inoita chirevo pasina kukurira nzvimbo. peya chigaro chekudyira nechero tafura yekudyira yechinyakare, zvigaro zvakagadziridzwa nenzvimbo yekudyira Zvakanakisa pane zvese, Zvakanakisa pane zvese, zvinhu zvedu hazvipinze hunyoro uye zvinodzosera tsvina uye zvinotyisa, kugadzira kuchenesa mhepo. Kudya kwekuparadzanisa kunogonawo kutengwa kuti uwedzere seti yako mberi Ongorora iyo yese chigadzirwa chigadzirwa kuti ubatanidze imwe bea ...
2018 Special China Design Design Garden Chair Chair - China Special Design